OKUTHENGEKAYO | Izinsizakalo ze-LOW COST Company Incorporation Services eCayman Islands kanye namazwe we-105 aqala ngo- $ 100 | Inkampani Limited by Shares formation Cayman Islands, Company Limited yiShares Registration Cayman Islands, Company Limited yiShares incorpo
Yazi kabanzi ngeCayman Islands
Iziqhingi zaseCayman zineziqhingi ezintathu: iGrand Cayman, iCayman Brac, neLittle Cayman. Okukhulu kunazo zonke, iGrand Cayman ine-vibe yomhlaba wonke, amathilomu amahle, uhlu olucwilayo, kanye ne-Seven Mile Beach edumile. ICayman Brac yipharadesi lemvelo yesithandwa sokucwilisa okucwebezelayo nokuhambahamba okumangazayo eduze kwempikiswano enokhahlo. Isiqhingi esincane kunazo zonke, iLittle Cayman siyikhaya labantu abayi-150 kuphela. Izivakashi ziyawuthokozela umoya ojwayelekile kanye nokugxuma, ikakhulukazi iBloody Bay Wall, ebhekwa njengenye yezindawo ezihlukanisa kakhulu emhlabeni. Abanye babavakashi abayizigidi ezingama-2.5 bavakashela iziQhingi zaseCayman minyaka yonke. Iningi labo ngabahambi bezokuhamba ngohambo, abafaka amahora ambalwa bethenga, bathamela ilanga, noma babhukuda ngama-stingray ngaphambi kokuphuma ethekwini. Abanye bagubha eduze ne-Seven Mile Beach, basebenzise kakhulu ihhotela labo eliphelele kwelinye lamatshe aseCaribbean amahle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngenhlanhla awukho omunye umzamo wokuqhubeka.
Esinye sezimo ezinkulu emhlabeni ezigxile ekuphatheni imali kanye nesiphephelo sokuhlola esivelele, lesi sifunda saseBrithani phesheya eCaribbean sinezinhlangano eziningi ezibhalisiwe kunabantu abathile.
Zavunyelwa ukuzimela okuvelele ngo-1972, iziqhingi zakhuphula izinga lokuzibusa ngaphansi komthethosisekelo wango-2009 nokho inhloko yayo yokuqala, uMcKeeva Bush, yaxoshwa ngentukuthelo yokwehliswa ngo-2012. Iziqhingi ziqhakambisa ekhefini lika-2017 elibizwa ngamaPharadesi Papers, aveza ukusebenzelana kwesabelomali kwabasemthethweni, izinkanyezi, izilo zezinkampani kanye namaphayona ebhizinisi.
Iziqhingi zaseCayman zingenye yezindawo zokukhosela eziphawuleka kakhulu emhlabeni. Ngokuphikisana nezizwe eziningi, amaCayman awanaso isibopho sokusebenzisana, okwenza kube yindawo ekahle yobambiswano lomhlaba wonke ukusungula izinto ezisizayo ukuvikela abambalwa noma wonke umholo wabo enteleni.
Ngaphandle kokungabi nomsebenzi wobumbano, iziQhingi zaseCayman aziphoqi nhlobo imisebenzi kubahlali. Abanazindleko zomuntu siqu, abanayo imithwalo yempahla, abanawo umthwalo wokunyusa imali, abanamacala wezezimali, futhi abanayo imali yokugcinwa. Ngale ndlela babhekwa njengomsebenzi ngokungakhethi.
Esikhundleni sokuthola imali ngokuhlola ngqo intela, amaCaymans athola imali ngezindleko ezikhonjwe ngokuhlala ngaphezulu kwemboni yezokuvakasha kanye nezibonelelo zomsebenzi, ukushintshaniswa kwemali okuhlobene, kanye nezibopho zokungenisa. Izindleko zesibopho zibekwa enanini lokuthengiswa kwempahla elingeniswe kumaCaymans, ngejubane lama-22% kuya kuma-27%. Izinto ezimbalwa, ngokwesibonelo, iresiphi yengane, ziyaxolelwa kwizindleko zesibopho, ngenkathi okuthengiswayo okuhlukile, ngokwesibonelo, izimoto, kukhokhiswa ngezinga eliphakeme ngokuya ngesilinganiso semoto. Ezimotweni ezibizayo, inani lesibopho sokukhokhisa lingaphakama ngama-42%.
Imithetho Yomsebenzi Eziqhingini ZaseCayman
AbakwaCayman sebephenduke indawo yokukhosela edumile phakathi kwezinkampani ezisezingeni lomhlaba laseMelika kanye nezinkampani ezinkulu zomhlaba ngenxa yokuthi ayikho intela yenkampani noma yonyaka yemali etholwe ngaphandle kwesifunda sayo. Lokhu kufaka imali engenayo noma inzuzo etholwe emabhizinisini, okwenza amaCayman adume ngokukhethekile phakathi kwabaqondisi bezokutshalwa kwezimali abanamakhono amaningi.
Esikhundleni samacala, ubambiswano lwasolwandle lukhokhela isishayamthetho izindleko ngqo ngonyaka. Lokhu kukhokhiswa kuncike esilinganisweni semali enikezwayo egunyaziwe inhlangano enayo. Njengazo zonke izindlu zezindleko, imithetho yezokuphepha ibalulekile. AbakwaCaymans bakwenza kube lula kubantu nosomabhizinisi ukuvikela izinsiza zabo nobuntu babo ekubukeni ngamehlo.
Imali ekhokhwa nguhulumeni nesevisi ekhokhiselwa i- Ukufakwa kwenkampani yasolwandle Cayman Islands
● Imali yethu Yensizakalo yeNkampani Inqunyelwe ngamasheya eCayman Islands (unyaka wokuqala) - $ 1
Uma ufuna ukubhalisa inkampani eCayman Islands, lapho-ke, sizokunikeza imininingwane ecacile nengachemile mayelana nokwakheka kwenkampani eCayman Islands nokuthi ungayibhalisa kanjani iCayman Islands Company noma enye indawo ethile. Abenzeli bethu benkampani eCayman Islands abanikezela ngezinsizakalo zokubhaliswa kwenkampani zokubhaliswa kwenkampani yase-Onshore eCayman Islands nasekubhaliseni inkampani e-Offshore eCayman Islands. Futhi, ngenxa yamakhasimende ethu amakhulu eCayman Islands kanye nenethiwekhi yamabhange yamazwe omhlaba yamazwe we-109 kufaka phakathi iCayman Islands, thina njengomethuli wakho othembekile, sizokusiza ekuvuleni ama-akhawunti asebhange ezinkampani eCayman Islands futhi futhi uma udinga i-akhawunti yasebhange engaphesheya kwezilwandle evela eCayman Islands ezinkampanini ezakha eCayman Islands, ngathi. Inkampani yakho ifakwe eCayman Islands, singakunikeza nephakheji ephelele yensiza yeCayman Islands eyenzelwe wena nomndeni wakho, okubandakanya, usizo olunolwazi, oluthathe iminyaka eminingi yesipiliyoni ngenqubo yokufudukela eCayman Islands, uma ufuna ukufaka isicelo se- Imvume yokuhlala eCayman Islands, xhumana nathi namuhla.
⦿ Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCayman Islands
Ukwakhiwa kweNkampani eziqhingini zaseCayman nakwamanye amazwe e-109 anezinsizakalo zokubhaliswa kwezinkampani ezihamba phambili eCayman Islands.
Imisebenzi Yezinkampani Ezenzelwe Umuntu eCayman Islands ukuze ubhalise inkampani eCayman Islands ngentengo engabizi.
Ababonisi abakhulu bezinkampani eCayman Islands abanikeza izinkampani ezilula kakhulu eCayman Islands ngecebo lebhizinisi.
Faka inkampani entsha eCayman Islands ngentengo eshibhile, imali yethu yokufakwa kwenkampani eCayman Islands ishibhile.
Iminyaka eyimpumelelo yokubhaliswa kwenkampani yeCayman Islands kubantu ngabanye namabhizinisi eCayman Islands yabo bonke osayizi.
Ababonisi bezinkampani abanolwazi eCayman Islands abahlinzeka ngemisebenzi yezinkampani zeCayman Islands ukuze uzuze.
Abacebisi abaphezulu bezinkampani eCayman Islands abahlinzeka ngezinsizakalo zokubhalisa inkampani ezihamba phambili eCayman Islands kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.
Ababonisi bethu bokwakhiwa kwenkampani eCayman Islands baqonda izidingo zakho kuwo wonke amabhizinisi aseCayman Islands ukuhlinzeka ngazo zonke izinsizakalo.
Abasebenzeli bethu bokubhaliswa kwezinkampani zeCayman Islands basekela ngokugcwele abokufika kanye nokuchithwa kweziqhingi zaseCayman eziqhamuka emhlabeni wonke.
Ukubhaliswa kwenkampani eziqhingini zaseCayman ze Imboni Yasebhange.
Ukuhlanganiswa kwenkampani eCayman Islands for ukukhishwa kwamabhizinisi.
Ukwakheka kwenkampani eziqhingini zaseCayman ze Ingqalasizinda Nokwakha.
Bhalisa inkampani eCayman Islands ukuze umkhakha wezemfundo.
Faka inkampani eCayman Islands ye Umkhakha we-F & B.
Yakha inkampani eCayman Islands ye umkhakha wezokunakekelwa kwempilo.
Faka inkampani yakho eCayman Islands ye- imboni yokukhiqiza.
Setha inkampani entsha eCayman Islands ye izinkampani zamandla kagesi.
Ukuvulwa kwama-akhawunti ezinkampani eCayman Islands for Umkhakha womshwalense.
Ukubhaliswa kwenkampani eziqhingini zaseCayman ze IT Ibhizinisi.
Ukubhaliswa kwenkampani yabameli eziqhingini zaseCayman ze Abameli.
Bhalisa inkampani entsha eCayman Islands ukuze umkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha.
Faka inkampani entsha eCayman Islands ye i-petrochemical.
Yakha inkampani entsha eCayman Islands ye imisebenzi yocwaningo nentuthuko.
Ukubhaliswa kwenkampani ye-Offshore kusuka eCayman Islands for umkhakha wosizo lwezezimali.
Ukufakwa kwenkampani ye-Offshore kusuka eCayman Islands ye imboni yemali ye-crypto.
Ukwakhiwa kwenkampani ye-Offshore kusuka eCayman Islands for umkhakha wezokuxhumana.
Setha inkampani eCayman Islands for umkhakha wezimoto.
Bhalisa inkampani yasolwandle kusuka eCayman Islands ukuze ukuhweba ibhizinisi.
Faka inkampani eselwandle eCayman Islands for izinsiza zokubonisana.
Bhalisa inkampani entsha eCayman Islands ukuze ukubonisana ngebhizinisi.
Yakha inkampani entsha eCayman Islands ye Abakwa-HR bayabonisana.
Sisekela Inkampani ekulungele ukwenziwa eCayman Islands kanye namazwe ayi-107 afaka iziQhingi zaseCayman nase-US, ezaziwa nangokuthi, “inkampani endala”ECayman Islands
Ukuthuthukiswa kweSoftware okungabizi eCayman Islands | Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano okungabizi eCayman Islands
Sisekela abantu nezinkampani ekwakhiweni kweNkampani eCayman Islands, eyaziwa nangokuthi, ukufakwa kweNkampani eCayman Islands, Ukubhaliswa Kwenkampani eCayman Islands singaphinde sisekele i-Offshore Company Formation kusuka eCayman Islands, Offshore Company Registration kusuka eCayman Islands, Offshore Company ukufakwa kusuka IZiqhingi zaseCayman nazo amadolobha esiwasekelayo eCayman Islands yilezi: Ukufakwa kweNkampani eGeorge Town, Ukubhaliswa Kwenkampani eGeorge Town, Ukuqanjwa KweNkampani Yase-Offshore kusuka eGeorge Town, Ukubhaliswa Kwenkampani Yase-Offshore kusuka eGeorge Town, ukufakwa kweNkampani ye-Offshore kusuka eGeorge Town.
Ukwakhiwa kwenkampani eCayman Islands kwenziwa ngempumelelo ngokuxhaswa ngabenzeli bethu benkampani eCayman Islands, okwaziwa nangokuthi, abasebenza ngokufaka izinkampani eCayman Islands kanye nababhalisi bezinkampani eCayman Islands, sisekela ukulandela amanxusa okwakhiwa kwamakhampani eGeorge Town, abasebenzeli benkampani eGeorge Town, abasebenzeli bokubhaliswa kwezinkampani eGeorge Town abasebenza ngokuqanjwa kwezinkampani ezingasogwini eGeorge Town, abasebenzeli bezinkampani ezingaphesheya kwezilwandle eGeorge Town, abasebenzela ukubhaliswa kwezinkampani ezingasogwini eGeorge Town.
Sigcina izinga eliphezulu kakhulu lenkonzo yeNkampani Incorporation yenkampani eCayman Islands, futhi, sinikela ngamanani amahle kakhulu wokubhaliswa kwenkampani eCayman Islands ngenxa yamavolumu ethu aphezulu kanye nababhali bezimali benkampani abasezingeni eliphakeme eCayman Islands, eyaziwa nangokuthi, abasebenzeli bezinkampani eCayman Islands kanye nababonisi bokwakhiwa kwezinkampani eCayman Islands bakunikeza izinsizakalo ezingabizi kakhulu zokwakhiwa kwezinkampani eCayman Islands.
Isiza Sikahulumeni SaseCayman Islands - www.gov.ky
UMnyango Wezokufuduka - www.imigration.gov.ky
UMnyango Wezentela - www., esebusibi.com
Ihhovisi likaKhomishani Wezikhalazo - www.occ.gov.ky
ICayman Islands Water Authority - www.waterauthority.ky
Isinyathelo Sokuvuselelwa Komthethosisekelo - www.constitution.gov.ky
Inkululeko Yokwaziswa - www.lutho.cu
Amazwe Nenhlolovo - www., unenkomanden.ky
Ukuvakasha Kwemvelo - www.naturecayman.com
Uhlelo lwezemvelo lwe-JGHS - www.lokuncube.cz
UMnyango Wezokuvakasha Wezokuvakasha - www., indawo-yco.ky
Isista Islands Tourism - www.lndisoft.com
Igumbi Lezamabhizinisi - www.anayolayind.netsons
Uphiko Lokuthuthukiswa Kwamabhizinisi Amancane - www.asokuhlenmasi.gov.ky
Ukuzikhulula ngokwakhiwa kwenkampani eCayman Islands
● Izinsizakalo zokwakhiwa kwezinkampani zeCayman Islands azinikezwa Abahwebi, abasabalalisi noma abakhiqizi bezikhali, izikhali, izinhlamvu, amasosha noma izinkontileka zesivumelwano ngaphakathi noma ezisuka noma eziya eCayman Islands.
● Izinsizakalo zokufakwa kwenkampani zeCayman Islands azihlinzekelwa ukuqashwa ngeTechnical noma okokusebenza kwe-bugging noma ubuhloli bezimboni ngaphakathi noma ukusuka noma ukuya eCayman Islands.
● Izinsizakalo zokuhlanganiswa kwezinkampani zeCayman Islands azinikezwa abantu noma izinkampani eziseCayman Islands noma ezisuka noma ezisuka noma eziya eCayman Islands ezisebenza ngebhayoloji eyingozi noma enobungozi, amakhemikhali awanikezwa abantu noma izinkampani eziseCayman Islands ezisebenza ngezinto zenuzi, kufaka phakathi, imishini noma okokusebenza okusetshenziselwa ukwenza, ukuphatha noma ukulahla noma yiziphi izinto ezinjalo.
● Izinsizakalo zokwakhiwa kwezinkampani zeCayman Islands ezinganikezelwanga izinhlangano zokutholwa, kufaka phakathi izinqubo zokuba ngumzali ngokwesivumelwano noma yiluphi uhlobo lokuhlukumezeka kwamalungelo abantu e-noma eCayman Islands.
● Izinsizakalo zokuhlanganisa izinkampani zeCayman Islands azihlinzekelwa amasiko ezenkolo kanye nezinhlangano ezisiza umphakathi e-Cayman Islands.